နည်းပညာလောကကို ဂယက်ထစေခဲ့တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာမလေးတစ်ယောက်
Mark Zuckerberg စကားတစ်ခွန်း မဟခင်ကတည်းက Facebook ရဲ့ feature အသစ်တွေ အမြဲပေါက်ကြားလေ့ရှိတာ သိကြမှာပါ။ ဒါဆိုရင်ရော အဲဒီ့ပေါက်ကြားမှုတွေက ဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲ? အဖြေကတော့..
Jane Wong ဆိုတာ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ဆော့ဖ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာမလေး တစ်ယောက်ပါ။ Massachusetts Dartmouth တက္ကသိုလ်မှာ အိုင်တီပညာကို တက်ရောက်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ကျောင်းခဏနားကာ ဟောင်ကောင်မှာ နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ သူမဟာ ခရီးသွားတာနဲ့ ဓာတ်ပုံပညာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အပြင် အခြားကျွမ်းကျင်မှုတွေကတော့ reverse engineering လို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ပြူတာ ပရိုဂရမ်တွေကို ပြန်ပြင်ဆွဲရတာနဲ့ coding error တွေကို ရှာပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Reverse engineering ဆိုတာ ပရိုဂရမ်ရဲ့ code တွေကို အစကနေ ပြန်ဆွဲပြီး ပရိုဂရမ်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ရှာတဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်။ Wong ဟာ ဒီနည်းနဲ့ နာမည်ကြီး app တွေက ဘာတွေကို စမ်းသပ်နေလဲ ဆိုတာကို အဖြေထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ Facebook ရဲ့ Dating feature အကြောင်းလည်း သူမဆီကပဲ စပေါက်ကြားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် Reverse engineer သမားတွေ များစွာရှိတဲ့အထဲ Wong ကတော့ ဒီအလုပ်နဲ့ ပိုက်ဆံရှာနေတာ မဟုတ်ဘဲ သူမကို အလုပ်လာအပ်ရင်တောင် ငြင်းလွှတ်တတ်ပါသေးတယ်။ သူမရဲ့ Twitter မှာ app တွေရဲ့ စမ်းသပ်ချက်တွေကို ခဏခဏ ပေါက်ကြားအောင် တင်တတ်ပေမယ့် ဒီလိုရှာဖွေမှုတွေကိုလည်း သူမက အားလပ်ချိန်မှာသာ လုပ်တတ်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
Wong ဟာ feature အသစ်တွေကို spoil တတ်တယ်ဆိုပေမယ့် သူမက သူမ ဝင်စစ်တဲ့ app တွေမှာ coding error (bug) တွေကို တွေ့တာနဲ့ bug bounty programs တွေဆီ ရီပို့တန်းတင်ပြီး ဖြေရှင်းပါတယ်။ bug bounty programs ဆိုတာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက သူတို့ရဲ့ app တွေရဲ့ အားနည်းချက်ကို ရှာဖွေပေးသူတွေကို ဆုငွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ခေါ်တာပါ။
လက်ရှိမှာ Wong က ကျောင်းသူတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘွဲ့ရပြီးရင်တော့ reverse-engineers ပိုင်းမှာပဲ အလုပ်လုပ်ချင်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ အခုတော့ သူမက ထိုအလုပ်ကို အပျော်တမ်းလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီတွေကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အကျိုးပြုသလို feature အသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း အမြဲပေါက်ကြားစေတတ်သူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
Mark Zuckerberg စကားတဈခှနျး မဟခငျကတညျးက Facebook ရဲ့ feature အသဈတှေ အမွဲပေါကျကွားလရှေိ့တာ သိကွမှာပါ။ ဒါဆိုရငျရော အဲဒီ့ပေါကျကွားမှုတှကေ ဘယျကဖွဈလာတာလဲ? အဖွကေတော့..
Jane Wong ဆိုတာ အသကျ ၂၃ နှဈအရှယျ ဆော့ဖျဝဲ အငျဂငျြနီယာမလေး တဈယောကျပါ။ Massachusetts Dartmouth တက်ကသိုလျမှာ အိုငျတီပညာကို တကျရောကျလလေ့ာခဲ့တာဖွဈပွီး လကျရှိမှာတော့ ကြောငျးခဏနားကာ ဟောငျကောငျမှာ နထေိုငျလကျြရှိပါတယျ။ သူမဟာ ခရီးသှားတာနဲ့ ဓာတျပုံပညာကို စိတျဝငျစားတဲ့အပွငျ အခွားကြှမျးကငျြမှုတှကေတော့ reverse engineering လို့ချေါတဲ့ ကှနျပွူတာ ပရိုဂရမျတှကေို ပွနျပွငျဆှဲရတာနဲ့ coding error တှကေို ရှာပေးခွငျးတို့ ဖွဈပါတယျ။
Reverse engineering ဆိုတာ ပရိုဂရမျရဲ့ code တှကေို အစကနေ ပွနျဆှဲပွီး ပရိုဂရမျရဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို ရှာတဲ့ နညျးဖွဈပါတယျ။ Wong ဟာ ဒီနညျးနဲ့ နာမညျကွီး app တှကေ ဘာတှကေို စမျးသပျနလေဲ ဆိုတာကို အဖွထေုတျလရှေိ့ပါတယျ။ Facebook ရဲ့ Dating feature အကွောငျးလညျး သူမဆီကပဲ စပေါကျကွားခဲ့တာပါ။ ဒါပမေယျ့ Reverse engineer သမားတှေ မြားစှာရှိတဲ့အထဲ Wong ကတော့ ဒီအလုပျနဲ့ ပိုကျဆံရှာနတော မဟုတျဘဲ သူမကို အလုပျလာအပျရငျတောငျ ငွငျးလှတျတတျပါသေးတယျ။ သူမရဲ့ Twitter မှာ app တှရေဲ့ စမျးသပျခကျြတှကေို ခဏခဏ ပေါကျကွားအောငျ တငျတတျပမေယျ့ ဒီလိုရှာဖှမှေုတှကေိုလညျး သူမက အားလပျခြိနျမှာသာ လုပျတတျတာလို့ ဆိုပါတယျ။
Wong ဟာ feature အသဈတှကေို spoil တတျတယျဆိုပမေယျ့ သူမက သူမ ဝငျစဈတဲ့ app တှမှော coding error (bug) တှကေို တှတေ့ာနဲ့ bug bounty programs တှဆေီ ရီပို့တနျးတငျပွီး ဖွရှေငျးပါတယျ။ bug bounty programs ဆိုတာ ကုမ်ပဏီကွီးတှကေ သူတို့ရဲ့ app တှရေဲ့ အားနညျးခကျြကို ရှာဖှပေေးသူတှကေို ဆုငှပွေနျထုတျပေးတဲ့ အစီအစဉျတှကေို ချေါတာပါ။
လကျရှိမှာ Wong က ကြောငျးသူတဈယောကျသာ ဖွဈပါတယျ။ ဘှဲ့ရပွီးရငျတော့ reverse-engineers ပိုငျးမှာပဲ အလုပျလုပျခငျြကွောငျးဆိုပါတယျ။ အခုတော့ သူမက ထိုအလုပျကို အပြျောတမျးလုပျနတောဖွဈပွီး ကုမ်ပဏီတှကေိုလညျး တဈဖကျတဈလမျးက အကြိုးပွုသလို feature အသဈတှနေဲ့ပတျသကျလို့လညျး အမွဲပေါကျကွားစတေတျသူ တဈယောကျလညျး ဖွဈနပေါတယျ။